ENTSHA! I-SkyView@Yosemite-TreeHouse +Igumbi leMidlalo kunye ne-Spa
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguCy & Resh
UCy & Resh ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Wamkelekile kwi-SkyView @ Yosemite: I-Postmodern Treehouse ebekwe phakathi kwemithi ye-Sierra National Forest kunye neekhilomitha ezili-12 ukusuka ekungeneni okusemazantsi kwi-Yosemite National Park. Vumela i-SkyView ibe yicamp ye-Yosemite adventure yakho okanye uhlale ukuze ube namava okonwaba kwendlu yemithi yangoku.
Yonwabela IGUMBI LOMDLALO ngepool entsha/itafile yehoki yomoya okanye uphumle kumgangatho wethu wokusonga nge-TUB ENTSHA ENTSHA ngelixa umamele izandi zehlathi kunye nomlambo okufutshane.
Itshaja yeNqanaba lesi-2 ye-EV iyafumaneka kwiSiza!!
Yakhelwe ukuba ibe ngaphezulu kwayo yonke into, kwaye ihlaziywe ngokucingisisiweyo kwiminyaka yakutshanje, le ndawo iphakamileyo ye-Postmodern Treehouse ingumxube ogqibeleleyo woyilo lwangoku oludityaniswe nezinto zoyilo lwe-rustic, ifenitshala etofotofo, kunye ne-decor ecingisisiweyo kulo lonke.
Imbali yembali malunga neSkyView: Indlu yakhiwe ngokuthe ngqo kwimbali yeSiteji seNdlela yoQeqesho ukusuka eFresno Flats ukuya eYosemite. I-Fresno Flats yabizwa ngokuba yi-Oakhurst ... iminyaka emva kokuphanga komqeqeshi odumileyo wenza idolophu idume kakubi).
Umgangatho ongasemva wakhiwe kwindawo ethe tyaba ekuyindlela yokuqala. Ukuhlala eSkyview kufana ncamashi nokuhlala kwisiqwenga sembali yaseMelika.
Hlala ngaphakathi ukonwabela uyilo lwamvanje. Igumbi elikhulu liqhayisa isilingi ekhazimlisiweyo eyi-20'+, indawo yomlilo yamatye entle kunye nenqanaba elithambileyo lokubuyela ekoneni ukonwabela iimbono ezivela kwiifestile ezinkulu ezintle. Indawo yokuhlala ibandakanya iindawo ezimbini zokuhlala, iisofa ezitofotofo, indawo yomlilo yeenkuni, iTV ehlakaniphile, inkqubo yomculo, imidlalo, ubugcisa kunye nokunye.
Igumbi lokutyela / IKHITSHINI
Kwelinye icala lendawo yomlilo kuhlala indawo yokutyela yanamhlanje ene-rustic ejikelezwe ziifestile ezininzi kwelinye icala kunye nekhitshi evulekileyo evulekileyo kwelinye. Ukusuka kuzo zonke izinto eziyimfuneko kwisidlo esiphekwe ekhaya (iimbiza, iipani, izitya, njl njl) ukuya kwi-combo Keurig/Drip Coffee Maker, uya kuziva usekhaya.
Amagumbi okulala ayindawo entle yokuphumla ekupheleni kosuku. Kukho ibhedi yeKing kwigumbi lokulala elikhulu kumgangatho omkhulu kunye ne-ensuite edibeneyo. Phezulu kwizinyuko ezijikelezayo kukho amagumbi amabini okulala kunye nebhafu. Igumbi lokulala eli-#2 linebhedi ye-Queen kunye ne-sofa / ibhedi edibeneyo. Igumbi lokulala #3 ngumaleko wethu we-whimsical jack-a-lope enebhedi yokumkanikazi kunye nehombiso yokudlala.
NGAPHANDLE kunye neTUB eshushu
Umgangatho wethu osongayo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzintywilisela kwindalo enefenitshala ekhululekile yangaphandle, indawo yomlilo yepropane, i-BBQ Grill kunye ne-HOT TUB SPA entsha. Yonwabela ikofu yasekuseni kunye nexesha elisemgangathweni kunye nosapho kunye nabahlobo ngelixa uthatha umbono omangalisayo wentaba kunye nehlathi lepine kunye nezandi zendalo macala onke. Iintlobo ngeentlobo zezilwanyana zasendle ezibandakanya amaxhama, amakalakuni asendle, imivundla kunye nezinye iindidi zeentaka/izilwanyana zendalo zininzi.
Igaraji iguqulwe yaba ligumbi lokuhlala lomdlalo elinechibi eliguqukayo / itafile yehoki yomoya, iidati, umngxuma wombona, indawo yokuhlala etofotofo, inkqubo yesandi kunye nokunye ukonwatyiswa kunye nabahlobo kunye nosapho.
Kuluntu olukhulayo lwe-EV, sinenqanaba lokufunwa kwe-2 EV tshaja. Imiyalelo yokusetyenziswa iya kunikwa xa ungena
Kwabo bakhetha ukuqhagamshelwa, sinesantya esiphezulu se-intanethi kunye ne-Smart TV/Roku ukonwabela usetyenziso lwakho oluthandayo.
- I-Postmodern Treehouse enendawo yokuhlala ye-8
-Idesika entle enefenitshala yelounge, iindawo ezingqonge ihlathi, i-BBQ, ibhafu eshushu evulekileyo ukusuka entwasahlobo ukuya ekwindla, njl njl. Ezothando, ezolile kwaye ziyonwabisa.
-NEST Smart Thermostat
- Umoya womoya ophakathi kunye nobushushu
-Iwasha kunye nesomisi
-I-WiFi yesantya esiphezulu yasimahla.
- Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo
-Propane BBQ Grill
-Iindawo zokuHlala zangaphakathi nangaphandle
- ithatha abantu abayi-8 ngokukhululeka
-Itafile yomlilo yePropane yangaphandle
-Igumbi lomdlalo wegaraji
*** IiProtokholi zokucoca ze-AirBNB COVID-19
NjengeeSuperhosts ezizayo, senze ucoceko lwaba yinto ephambili kwiipropathi zethu, kwaye uphononongo lwethu luyayiqaqambisa le nyani. Ngengxaki yangoku ye-COVID-19, sithathele kwinqanaba elitsha ukucoca kunye nokubulala iintsholongwane. Abacoci bethu balandela ngokungqongqo inkqubo yokucoca ka-Airbnb enamanyathelo ama-5. Nceda uzive ukhululekile ukufikelela kuthi ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
55" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Apple TV, I-Chromecast, I-Disney+, I-HBO Max, I-Hulu, I-Netflix, I-Roku
Sibekwe kwindawo enoxolo yeYosemite Forks ebekwe kumda wehlathi laseSierra National & Yosemite National Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Cy & Resh
Zive ukhululekile ukuba uqhagamshelane nam ngefowuni okanye umbhalo ngayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oakhurst